Botswana: njem Safari maka ndị ọgaranya (ma ama?)
Home » Akụkọ ndị ọbịa nke mba ụwa » Botswana njem akụkọ » Botswana: njem Safari maka ndị ọgaranya (ma ama?)
Nwere ike 5, 2018
by Dr. Elinor Garely - onye nchịkọta akụkọ na wines.travel
dere Dr. Elinor Garely - onye nchịkọta akụkọ na wines.travel
N'oge na-adịbeghị anya, Botswana ruru ọkwa ndị ama ama mgbe ekpughere na Prince Harry nyere Meghan Markle mgbanaka aka site na mba Africa a n'ogige safari dịpụrụ adịpụ nke dị n'akụkụ ọdịda anyanwụ nke Botswana Makgadikegadi Pans National Park.
Botswana, ala nke di na Southern Africa, no na obodo Kalahari, Okavango Delta, Central Kalahari Game Reserve, Chobe River na National Park. Ndị njem na-achọsi ike ịhụ giraffes, cheetahs, rhinos ojii, hyenas, nkịta ọhịa, agụ iyi na ìgwè enyí ndị kachasị ukwuu na mbara ala, na-arịọ ndị na-ahụ maka njem ha ka ha hazie safari ha n'akụkụ a nke ụwa.
Nature Chọrọ ọkara
Obodo a nwere otu n'ime ala kachasị elu nke ala maka nchekwa - ihe ruru pasent 45 nke mkpokọta ala. Iji tụlee mpaghara echedoro, a ga-ekewa ya dịka, "mpaghara ala na / ma ọ bụ oké osimiri nke kachasị nye nchedo na ndozi nke ụdị ndu dị iche iche, na nke ihe okike na nke ọdịbendị metụtara ya, ma jikwaa ya site n'ụzọ iwu ma ọ bụ n'ụzọ ndị ọzọ dị irè" (4th World Congress na National Parks na ebe echedoro).
Botswana na-adọta ọtụtụ ndị ọbịa mba ụwa gụnyere US, mba ndị Britain na Commonwealth, Western Europe, Australia, Japan na Canada. South Africa, na Zimbabwe bu kwa ahia ahia maka ebe a di egwu. Njem nleta na ihe dịka pasent 16.3 nke GDP.
Ndị ọbịa hụrụ Botswana n'anya n'ihi ya:
• anụ ọhịa dị egwu
• Mara mma
• plọ ezumike na ebe ezumike
• Nanị ebe obibi
• operatorsrụ ọrụ (ma dị oke ọnụ) ndị na-arụ ọrụ ala
• Nchedo na nkwụsi ike ndọrọ ndọrọ ọchịchị
• Ndị enyi nke ndị mmadụ
Agbanyeghị, ndị ọbịa kwesịrị ịkwadebe maka akụrụngwa na-ezughị ezu, ọnụ ahịa dị elu maka safaris (amụma gọọmentị - ogo dị elu, mmetụta dị ala), yana njikọ ikuku dị oke na Europe.
Ka odi Zimbabwe. Ndewo Botswana
Gbọ njem ahụ site na Zimbabwe ruo Botswana bụ ihe na-atọ ụtọ n'ihi ihe ọ na-enweghị: enweghị azụmaahịa n'okporo ụzọ… enweghị ọdụ mmanụ, enweghị ụlọ nri, obere okporo ụzọ; ma, isi okwu… ụlọ mposi pere mpe ma sie ike.
Njikwa paspọtụ na ókèala dị oke ala mana ọ nwere ike ịme mgbagwoju anya (ọbụlagodi ihe ịma aka). Nke a bụ otu n'ime ọtụtụ oge mpaghara nduzi gị dị oke mkpa maka ahụmịhe njem na-aga nke ọma. Ndị ndu a maara ndị ọrụ na oke ala ma nwee ike ịkwado ọrụ akwụkwọ na ụgwọ. Gbalị ịghọta ihe ndị na-arụ ọrụ nke usoro ihe fọrọ nke nta ka ọ ghara ikwe omume, ọ gwụla ma ị nwere ahụmahụ na ọdịbendị na usoro ahụ. Ọ kachasị mma inyefe paspọtụ gị na Nduzi gị, yana ụgwọ achọrọ (na ego), ma banye usoro a ngwa ngwa o kwere mee.
Ndụmọdụ kacha mma: ịmụmụ ọnụ ọchị, kwuo okwu ọma, ma pụọ ​​n’ụzọ; isi ọrụ gị bụ ịhụ anụ ọhịa nke Botswana… nke a bụ ihe dọtara gị n'akụkụ a nke ụwa na mbụ.
N'ikpeazụ. Na-abata na Ngoma Safari Lodge
Mgbe ị na-eme njem ruo ọtụtụ awa, ọ bụ ihe ịtụnanya dị egwu ịhụ ka onye ọkwọ ụgbọ ahụ gbanyụrụ okporo ụzọ ma duzie ụgbọala ahụ n'okporo ụzọ adịghị ọcha nke mechara duga na Ngoma Safari Lodge. Mgbe m na - elele njirimara n’ onlinentanet, ọ dịghị mgbe m ga - ejide n’aka na ozi a bipụtara zuru oke. Ọbụna nyocha na TripAdvisor bụ onye a na-enyo enyo. Ruo mgbe m hụrụ, nụ, metụ aka ma nụ isi ngwaahịa a, ana m ejidesi obi abụọ ike.
Lodge zuru oke nke na o siri ike ikwenye na ọ bụ n'etiti enweghị ebe. Enweghị ụlọ obibi dị nso, enweghị ụlọ ahịa (n'eziokwu, enweghị ụlọ ahịa ebe ọ bụla), enweghị ụlọ nri na ndị agbata obi. Nke a bụ ebe ndị ọgaranya (ma eleghị anya ndị ama ama) nwere ike ịnweta ma chọpụta ọtụtụ ụba anụ ọhịa Botswana mgbe ha na-ekpori ndụ okomoko 5 + - site na nri na ebe obibi iji kpoo ọkụ, ọrụ enyi na ịrụ ọrụ nke ọma.
N'ịbụ ndị nwere ọ arrivalụ na ọbịbịa na ekele dị ọkụ sitere n'aka ndị ọrụ ahụ, a na-eduga ndị ọbịa na ebe ezumike ebe a na-enye ihe ọ coolụ coolụ dị jụụ na akwa nhicha oyi. Emechara akwụkwọ nchịkwa (ụbọchị / oge ịpụ, ozi nbanye Wi-Fi, oge nri, njikwa isi, ndepụta mmemme).
Na oge maka nri ehihie na nleta sara mbara, ụlọ ndị mara mma mara mma na ịsa ahụ - ọ bụ n'oge na-adịghị anya maka nleta mgbede na ụmụ anụmanụ.
Ọdụm, agụ owuru, enyí, rhino ojii, hippo, buffalo Africa tinyere wart hogs na meerkats, impalas, zebra na giraff na ọtụtụ ndị ọzọ nwere ike ịhụ mgbe ha na safari. Ohere maka anya ihu na-adabere na ihu igwe, ọnwa, oge nke ụbọchị na ọtụtụ nke jisie ike.
Midway na nyocha nke ogige mba, ka anyanwụ na-ada, ụgbọ ala ahụ kwụsịrị ma gbanwee ghọọ mmanya mmanya, mejupụta mmanya na-egbu maramara sitere na South Africa na obere obere nri.
Mgbe ahụ ọ lọghachiri n'ụgbọala ahụ, na-achọkwu anụ ọhịa, yana ịlaghachi na Lodge maka mmanya na nri abalị.
Chilly Botswana ụtụtụ zuru oke maka nri nri nri ụtụtụ na nri ụtụtụ abụghị naanị na-atọ ụtọ kama a na-egosipụta ya nke ọma.
Mgbe ụtụtụ na-eri ezigbo nri ụtụtụ na-edozi ahụ, oge eruola ka ị pụọ maka safari ụtụtụ. Anaghị anabata ọkwa ụlọ ọrụ 5-star - yabụ mee ka “olulu nkwụsị” tupu ị gawa ụgbọ ala ahụ. Na mgbakwunye, ogige ndị mba anaghị enwe ụlọ ahịa na nhọrọ nri ngwa ngwa, na-eme ka ọ dị mkpa ịkwakọ mmiri nke gị, mkpuchi anwụ, okpu, mkpuchi, akwụkwọ mposi, anụ ahụ, kamera, batrị na ihe ndị ọzọ ga-eme ka ndụ nwee ntụsara ahụ.
Gagharị na Osimiri-n'akụkụ anụ ọhịa na Chobe National Park
Agbamakwụkwọ ndị a na-echefu echefu na Mmanụ aeyụ
Ọ bụ ezie na ọ nwere ike ịdị mgbagwoju anya (ọtụtụ ọrụ akwụkwọ na ọ dịkarịa ala 48 awa nke oge gị) maka ndị ọbịa mba ụwa ịlụ na Botswana (na agbagha maka ịlụ di na nwunye nke abụọ), ọ bụ n'ezie ebe mara mma maka ezumike nke ezumike. Otu aro maka onyinye agbamakwụkwọ maka oriri agbamakwụkwọ eco-enyi na enyi bụ maka ndị ọbịa ịkwụ ụgwọ maka rhino ebe ọzọ ka ahapụ ha n'ọhịa na Botswana.
Botswana siri ike ịhapụ. Enwere ọtụtụ anụmanụ ị ga-ahụ, ogige ntụrụndụ na osimiri iji chọpụta, nke mere na abalị abụọ ezughi oke. Echere na otu n'ime njem safari anụ ọhịa kachasị mma n'Africa, a na-ewu ụlọ ọrụ njem njem nke Botswana na foto ọ bụ ezie na akụkọ ntolite ya jupụtara na ịchụ nta nke ndị na-achụ nta. Ọganihu dị ịrịba ama nke njem nlegharị anya foto nwere, n'ụzọ dị mma, kwụsịrị ụlọ ọrụ ịchụ nta ma ọ na-egbochi ya na 2014.
Nzuzo na ọzara na-enye akwa maka njem nleta na Botswana na ebe obibi na-ebikarị ebe obibi ndị ọbịa 8-20 na-eme ka ọ hụ egwuregwu karịa ndị mmadụ. A na-ahụta obodo ahụ dị ka nke ndọrọ ndọrọ ọchịchị na nchekwa maka ndị ọbịa. Ebumnuche nke mba a ugbu a bụ ịbawanye ụbọchị ụbọchị ndị ọbịa na-anọ na mba ahụ. Ugbu a ọnụnọ ahụ na-amalite site na ụbọchị 7-10; agbanyeghị, ụlọ ọrụ njegharị ga-achọ ịbawanye ọnụ ọgụgụ ahụ.
Agbanyeghị na a na-ahụta ya dị ka ebe dị ogologo, Botswana esighi ike ịnweta ụgbọ elu mba ofesi na Gaborone ma ọ bụ Johannesburg, yana ijikọ ụgbọ elu na mpaghara safari. Majorzọ kachasị n'okporo ụzọ na-enyere mba dị mfe iji ụgbọ ala na ụgbọ ala.
Botswana Sustainable njem
Botswana ewerela onye ndu na ịmegharị njem nlegharị anya na-adịgide adịgide. A na - agba ndị ọrụ ọhụụ ọhụrụ ume, ma na - anabata nkwalite ọnụ, ọkachasị maka ịgbatị ụlọ nkwalite na mbido. N’afọ 2016, mmekọrịta dị n’etiti gọọmentị nke Botswana, South Africa na Zimbabwe, yana ụlọ ọrụ nke onwe na obodo ndị ahụ zutere ebumnuche nke imepụta ohere ọhụụ maka gburugburu ebe obibi. A maara dị ka Mpaghara Mapungubwe Transfrontier Conservation Area, ebumnobi bụ ijikọ ebe echedoro na Zambia, Botswana, Namibia, Zimbabwe na Angola. Ọ ga-abụ na ịgbasa eco-njem na Botswana na mpaghara ahụ.
Ugbu a bụ oge iji gaa Botswana. Kpọtụrụ onye ndụmọdụ gị na-eme njem ma mee ndoputa gị ugbu a - kama ka emechaa.
Ichegharị njem nlegharị anya Hawaii: Gịnị kpatara o ji metụ ọnụ mmiri iceberg aka?
Akụkọ banyere ụlọ oriri na ọụ Hotelụ: The Elephantine Colossus Hotel